I-bungalow yasemaphandleni. Ukuphumula kwe-Redwoods Coastal. - I-Airbnb
I-bungalow yasemaphandleni. Ukuphumula kwe-Redwoods Coastal.
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Leana
U-Leana Ungumbungazi ovelele
I-bungalow yendlwana enoshukela etholakala endaweni evamile, ngaphandle nje kwe-Main Street e-Victorian Village yase-Ferndale. Chitha izinsuku zakho uhamba ngezinyawo phakathi kwabadlali abakhulu ehlathini elibomvu. Thatha uhambo lwemizuzu engu-10 oluhlaba umxhwele oluya ogwini lwe-pacific oluyindilinga. Noma mane uphume emnyango wakho futhi uthathe uhambo olufushane edolobheni ukuze ujabulele ubuncwane bamasevisi asedolobheni amancane angabandakanya; amagalari obuciko, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela, izindawo zokuthenga, amasevisi e-spa, isitolo se-quilt, okuningi kakhulu ongakufaka.
Ngena ebusuku kule ndawo ethokomele, enefenisha ephelele eyi-1 queen/1 yokugeza egcwele i-fireplace yegesi nekhishi eliphelele. Bhukha manje ucezu lokunethezeka kwedolobha elincane futhi uzizungeze ngobungcweti bezakhiwo ezilondolozwe kahle.
I-guesthouse ine-TV ne-wifi yamahhala ongayisebenzisa. Uzothola yonke imininingwane yokungena ku-akhawunti nokufinyelela evela ku-airbnb njengoba ukufika kwakho kusondela.
Le ndlu ihlanganyelwa nendlu eyinhloko. Qiniseka ukuthi uzoba nobumfihlo bakho. I-guesthouse igcinwe kude ngemuva kwegalaji lendlu eliyinhloko elinendawo yayo yokungena engemuva. Indawo yangaphandle ihlanganyelwa nendlu eyinhloko ngakho ungabona abantu behamba ngezinyawo ukuya nokubuya kodwa ngeke bakuphazamise. Sicela ungaphazamisi izivakashi zendlu eyinhloko. Mina, umbungazi wakho, ngizotholakala ngocingo noma nge-imeyili uma udinga noma yini!
Wamukelekile ukusebenzisa noma yimaphi amagceke endlini. Igceke elingemuva libheke ngaphandle kwedlelo elivulekile nezintaba kanye negceke elivikelekile lomoya kanye nawo wonke ama-patio. Sicela uhloniphe ubumfihlo bezivakashi zendlu eyinhloko njengoba nazo zihlanganyela indlu. Bazokunikeza isikhala nobumfihlo ukuze basebenzise indawo yangaphandle njengoba befisa ngakho zizwe ukhululekile ukuyisebenzisa!
Sinomakhelwane. Sicela uhloniphe omakhelwane. Amahora okuthula ngu-10pm-8am.
Le ndlu ihlanganyelwa nendlu eyinhloko. Qiniseka ukuthi uzoba nobumfihlo bakho. I-guesthouse igcinwe kude ngemuva kwegalaji lendlu eliyinhloko elinendawo yayo yokungena engemuva.…
ULeana Ungumbungazi ovelele